သင်၏အချိန်ကို ပေးအပ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၇)မျိုး | Shwe Canaan TV
သင်၏အချိန်ကို ပေးအပ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၇)မျိုး
00Unknown Thursday, 26 May 2016
(Seven kinds of person you need to spend time with) မြေကြီးပေါ်တွင် အသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိ သော ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်တာသည် အချိန် အကတ်အသန့်ရှိ...
(Seven kinds of person you need to
spend time with)
သော ကျွနု်ပ်တို့၏ အသက်တာသည် အချိန်
ကြီးပေါ်ရှိ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ထား ခဲ့
ကြရမည်။ (ဆာလံ ၉၀း ၁၀)အတိုင်း အသက်
(၇၀)ခန့်နေရမည် ဆိုပါက ရက်ပေါင်း (၂၅၅၅၀)ရက်
သာရှိသည်။ အသက် (၃၀)ပြည့်ပြီးသောသူအတွက် (၁၄၆၀၀)ရက်၊ အသက် (၄၀) ပြည့်ပြီးသော သူအတွက်(၁၀၉၅၀)ရက်၊ အသက်(၅၀)ပြည့်ပြီးသောသူအတွက် (၇၃၀၀) ရက်သာ ကျန်ရှိပေသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် သင့်အသက်တာ၏ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို ပညာရှိစွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး ပုဂ္ဂိုလ် (၇)မျိုး အတွက် မှန်ကန်စွာ ပေးအပ်၊ အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက် ကျွန်တော်ေ၀ငှသွားပါမည်။
၁။ ဘုရားသခင်အတွက် အချိန် (Time for God)
“အမိန့်တော်ထုတ်၍ တံဆိပ်ခတ်ကြောင်းကို ဒံယေလသည် ကြားသိသော်လည်း မိမိအိမ်သို့ သွား၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ မျက်နှာပြုရာ အထက်ပြတင်းပေါက် ဖွင့်လျက်ပင် အထက်ပြုလေ့ရှိ သည့်အတိုင်း တစ်နေ့ သုံးကြိမ် ဒူးထောက်လျက် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်း၍ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလေ၏” (ဒံယေလ၊ ၆း၁၀)။
ဒံယေလ၏ အသက်တာ၌ ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်ယူခြင်းကို မိမိအသက်ထက်ပင် ပို၍ အလေးထား ကြောင်းတွေ့ရှိရမည်။ သင်၏ကယ်တင်ရှင်၊ သင်ကို အသက်ပေးသူ၊ သင့်ကို မစ ထောက်ပ့ံသူ၊ သင်၏ခွန်အား၊ သင်၏မျက်မြင်မရသော အလုပ်ရှင်နှင့် တွေ့ဆုံ မိတ်သဟာယဖွဲ့ ဖို့ရန်အချိန်ကို အလေးအနက်ထားပါသလား? သစ္စာရှိပါသလား? သည်အရာကို Quiet Time (သို့မဟုတ်) ဘုရားနှင့် တစ်ဦးတည်းအချိန်ယူခြင်း (Time alone with God)ဟု ခေါ်ပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာထဲရှိ ဓမ္မဟောင်း၊ ဓမ္မသစ်ကာလမှာရော၊ သည်ကနေ့ထိ အသင်းတော် သမိုင်းမှာရော အောင်မြင်သော ခေါင်းဆောင်အားလုံး၏ တူညီသော လျိူ့၀ှက်ချက်တစ်ခုမှာ ဘုရားနှင့် တစ်ဦးချင်း အချိန်ယူခြင်းကို အလေးအနက် ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သည်အတွက်ကြောင့် ဘုရားနှင့် တစ်ဦးတည်း တွေ့ဆုံသောအချိန်သည် သင့်အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူပါ။
၂။ သင့်မိသားစုအတွက်အချိန် (Time for your family)
“မိမိလူတို့ကို မပြုစု၊ ထိုမျှမက မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို မပြုစုသောသူ မည်သည်ကား၊ ယုံကြည်ခြင်း တရားကို ငြင်းပယ်၏ မယုံကြည်ဘူးသောသူတို့ထက် သာ၍ ယုတ်မာ၏” (၁တိ၊ ၅း၈)။
မိသားစုဟူသည် ဘုရားပေးသော ဆုလာဘ်တစ်ခုဖြစ်၏။ အပြင်လူအားလုံးအတွက် ကောင်းပြီး မိမိ မိသားစုကို မပြုစုသေား ခေါင်းဆောင်သည် သမ္မာကျမ်း၏ သွန်သင်ချက်နှင့် သွေဖည်နေသူ ဖြစ်သည်။
သင်၏ အချိန်အချို့ကို မိသားစုအတွက် ပေးအပ်ပါ။ မိမိဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းသည်၊ သားသမီးများ နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံ၍ နှုတ်ကပတ်တော် သင်ကြားပေးခြင်း၊ အတူတကွ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း၊ အတူစားသောက် ခြင်း၊ ဈေး၀ယ်ထွက်ခြင်း၊ ကစားကွင်းသွားခြင်း၊ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်၍ မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းများအားဖြင့် မိသားစု၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာနှင့် ကဏ္႑စုံကို ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
၃။ သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် အချိန် (Time for yourself)
“ဘုရားသခင် ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသောသူသည် မိမိကိုယ်မိမိ စောင့်ရှောက်သဖြင့် မာရ်နတ် သည် ထိုသူကို မထိမခိုက်နိုင်ရာ” (၁ယော၊ ၅း၁၈)။
သင်သည် ၀ိညာဉ်ရေးရာနှင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၌ အစဉ်လန်းဆန်းကျန်းမာနေဖို့ရန်မှာ သင့် ကိုယ်သင် သတိပညာဖြင့် ဂရုပြုစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် မူတည်နေပေသည်။ ထိုမျှမက သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်မာသန်စွမ်း နေဖို့ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ သည့်အတွက်ကြောင့် အခါအားလျော်စွာ အချိန်ပေး၍ သင့်၀ိညာဉ်၊ စိတ်၊ ခန္ဓာ ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးရမည်။
အထူးသဖြင့် အသက်(၄၀)ကျော်လာပြီဆိုလျှင် မိမိကိုယ်ခန္ဓာကျန်မာရေးကို မကြာခဏ စစ်ဆေး၍ သင့်လျော်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု (ဥပမာ-လမ်းလျှောက်ခြင်း)ကို ပုံမှန် ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်သည်အထိ အလုပ် ၀န်ပိခြင်းမဖြစ်ရန် ဂရုပြုရမည်။ မိမိအတွက် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်များ (ဥပမာ-ကွန်ပျူတာရိုက်ခြင်း၊ ကားမောင်းဖြင်း) ပြည့်စုံလာရန်အတွက်လည်း လေ့လာသင် ယူမှု ပြုလုပ်ရမည်။
၄။ သင်ရွေးချယ်ထားသော လူစုအတွက်အချိန် (Time for your key people)
“ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိနေစေခြင်းငှါ၄င်း၊ တရားဟောသောအခွင့်၊ အနာရောငါတို့ကို ငြိမ်းစေ၍ နတ်ဆိုး တို့ကို နှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့် စေလွှတ်ခြင်းငှါ၄င်း၊ တစ်ကိျပ်နှစ်ပါးသောသူတည်းဟူသော ....တို့ကို ခန့်ထား တော်မူ၏” (မာကု၊ ၃း၁၄-၁၉)။
ယေရှုခရစ်တော်သည် သူနှင့်အတူ ရှိဖို့ရန်အတွက် တပည့်တော် (၁၂)ပါးကို ရွေးကောက် ခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ယေရှုသည် သူရွေးကောက်ထားသော တပည့်တော် (၁၂)ပါးအတွက် သူ၏အချိန် အများစု ကို ပေးအပ်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုတပည့်တော် (၁၁)ပါးနှင့် ရှင်ပေါလုအားဖြင့် ခရစ်တော်၏ “မဟာစေခိုင်းမှုကြီး”ကို ကမ်ဘာစွန်း ထိတိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်နိုင်စေမည့် အလားအလာ ရှိသော လူတစ်စုကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ သင်၏အချိန်ကို သူတို့အတွက် မြှုပ်နှံပါ။ သူတို့ကို ပြုစုပျိုး ထောင်ပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးပါ။ အလားအလာ မျှော်လင့်ချက်မရှိသော လူတွေအတွက် သင့် အချိန်ကို မဖြုန်းတီးပါနှင့်။
၅။ သင်၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်များအတွက် အချိန် (Time for your co-workers / colleagues)
“ထမ်းရွက်စရာ ၀န်ချင်းတို့ကို အချင်းချင်း ကူညီ၍ ထမ်းရွက်သောအားဖြင့် ခရစ်တော်၏ တရားကို ကျင့်ကြလော့” (ဂလာတိ ၆း၂)။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့် အလုပ်တာ၀န်ကို အသီးသီး ကိုယ်စီ ဆောင်ရွက်ကြ သည့်အခါ လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်အချင်းချင်း မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်း ပြုဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မိမိနှင့် လူမျိုး၊ ဂိုဏ်းဂန၊ သြဝါဒ ကွဲပြားစေကာမူ ခရစ်တော်၏ မေတ္တာဖြင့် အချင်းချင်း ကူညီစောင့်မမှု ပြုအပ်ပေသည်။
မိမိအား ကျေးဇူးပြုခဲ့သောသူများကို ကျေးဇူးတုန့်ပြန်နိုင်သော အခွင့်ရှိလျှင် တုန့်ပြန်ပြု အပ်ပေသည် (သု၊ ၃း၂၇)။ လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်နှင့်အတူ ဆုတောင်းခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်သောက် မိတ်ဖွဲ့ခြင်း (Tea-fellowship)၊ Seminar အတူတက်ခြင်း၊ အတူတကွ သင်တန်းပို့ချခြင်း၊ ဒေသနာ ေ၀ငှရန် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သည့်အခါ သွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးခြင်းစသည့်ဖြင့် သင်၏အချိန်ကို အသုံးပြု နိုင်ပေသည်။
၆။ သင်၏ သိုးစု/လူစုအတွက် အချိန် (Time for your sheep)
“ငါ၏ သိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို့သည်လည်း ငါ့ကို သိကြ၏” (ယောဟန် ၁၀:၁၄)
ယေရှုခရစ်တော်သည် အကောင်းဆုံးသိုးထိန်းအဖြစ် ကျွနု်ပ်တို့အား စံနမူနာပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သင်၏ သိုးစု(သို့) လူစုအတွက် အချိန်ကိုလည်းထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ ဂရုစိုက်ခြင်းကို ခံရသည့် လူစုက သင်၏ခေါင်းဆောင်မှုကို ၀န်ခံလာမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ အသင်းတော် (သို့) ကုမ္ပဏီကို ယခုထက် ပိုမိုအောင်မြင်စေလိုလျှင် အသင်းသူအသင်းသား (သို့) ၀န်ထမ်းများအတွက် သင်၏အချိန်ကို ပိုမိုပေးအပ်ဖို့ လိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းတို့၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို သိမြင်ပြီး ဂရုတစိုက်ဖြင့် တတ်အားသ၍ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရန် ဖြစ်သည်။
၆။ ပျောက်ဆုံး၀ိညာဉ်များအတွက် အချိန် (Time for the lost Souls)
“သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျှက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်း သော ၀ိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတိ္တဇံကို ပေးကြလော့” (မဿဲ၊ ၂၈း၁၉)။
သင်၏ မိသားစု၊ စီးပွားရေးအတွက်နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေပြီး ပျောက်ဆုံး၀ိညာဉ်များ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန်အတွက် အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင် အလုပ်မများနေဖို့ သတိပြုပါ။ ကယ်တင်ရှင်ကို မသိသေးသောသူများအတွက် သင်၏အချိန်အချို့ ကို ပေးအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကယ်တင်ရှင်ကို ဆာငတ်နေသူများဆီ အေ၇ာက်သွားပါ။ မေတ္တာပြပါ။ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပါ။ ဆေးရုံ၊ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲဘက်စခန်း၊ အနူရွာ၊ စစ်ရှောင်စခန်း၊ သဘာ၀ဘေးကြုံတွေ့ခဲ့သည့်နေရာ၊ မိဘမဲ့ ဂေဟာ၊ လူအိုရုံ စသည့်နေရာရှိ လူများထံ သွားရောက်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမစပါ။ သင်၏ အချိန်ကို ပေးအပ်ပါ။
“သင်၏ အသက်တာ၌ အချိန်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုတတ်သူ ဖြစ်ဖို့ရန် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် ဘုရား မစပါစေ။
Shwe Canaan TV: သင်၏အချိန်ကို ပေးအပ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၇)မျိုး